जो मलाई बचाऊ भन्दै थिइन - Dainik Online Dainik Online
जो मलाई बचाऊ भन्दै थिइन
प्रकाशित मिति : २२ असार २०७८, मंगलबार ७ : ५२
चितवन स् राप्ती नगरपालिका–३ की ४५ वर्षीया अम्बिका भण्डारीका आँखा ११ दिनदेखि ओभानो भएका छैनन्। रुँदा–रुँदा आँखा राता भएका छन्। छिनमै भक्कानिन्छिन्, छिनमै चुप लाग्छिन्। शरीर कमजोर भएर टाउकोमा फेटा बाँधेकी छिन्। आफूलाई सम्हाल्नै सकेकी छैनन्। आफन्त र छिमेकी आउँछन्, सान्त्वना दिन्छन्। उनीहरू आँखाभरि आँसु बनाउँछन्।
कसरी हुन्छ अपराधी पत्ता लगाइदिनुस्। मेरी छोरी फर्केर त आउदिन तर अपराधीलाई कारबाही हुनै पर्छ। अम्बिका भण्डारी, सुजिताकी आमा
‘मलाई बचाऊ ! मलाई बचाऊ ! भनेर छोरीले रुँदै फोन गरेकी थिई। हामीले बचाउन सकेनौं’, उनले रुँदै भनिन्, ‘अपराधीले त्यस्तो कुनामा लगेर तड्पाई–तड्पाई मार्‍यो।’
‘टाउकोमा कुटेर आँखामा पट्टी बाँधेछ। पछि कहाँ गएर आँखा खुल्यो ? कसरी फोन गर्न भ्याई ?, अम्बिकाले घटनाको विवरण सुनाइन्, ‘कसरी हुन्छ अपराधी पत्ता लगाइदिनुस्। मेरी छोरी फर्केर त आउदिन तर अपराधीलाई कारबाही हुनै पर्छ।’
सुजिता तरकारी लिन साथीको घरमा बोलाएको भन्दै असार ११ गते बिहान ६ बजे राप्तीकै जितपुर सिमरा हिँडेकी थिइन्। परिवारका अरू सदस्य घरमा रोपाइँ भएकाले त्यतै लागेका थिए।
सुजिताले मध्याह्न १२ बजे आफू अपहरणमा परेको भन्दै साइली दिदी कवितालाई फोन गरेकी थिइन्। कवितालाई उद्धृत गर्दै अम्बिकाले छोरीले आफूलाई दुई जना पुरुष र दुई जना महिला भएर अपहरण गरेको भनेर फोन गरेको सुनाइन्। साथीको घर नपुग्दै अपरहणमा परेपछि सुजिताको हत्या भएको आशंका परिवार र आफन्तको छ।